Radio taloha - Hevitra handravahana azy ireo | Bezzia
Susana godoy | 16/09/2021 14:00 | Decor
Azo antoka fa manana iray na maromaro ao an-trano ianao radio taloha. Satria izy ireo dia zavatra izay mijanona hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny sasany aza tsy miasa akory fa izy ireo foana no iray amin'ireo tandindon'ny tokantrano rehetra. Indrindra ho an'ireo taona izay raha tsy ny fahitalavitra no mpandray anjara voalohany fa misy ny zavatra ilaina rehetra amin'ny radio.
Raha manana relik amin'ny raibe sy renibenao ianao dia fotoana tokony hanararaotana anao hanomezana io laza io mihoatra ny taloha ary hanampy antsika handravaka. Te hanana hevitra momba izany ve ianao? Aza hadino izay rehetra manaraka fa azo antoka fa hanome aingam-panahy anao izany.
1 Radio taloha ao an-dakozia
2 Handravaka ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny sento Retro
3 Radio any amin'ny biraonao
4 Radio amin'ny lalantsara
Radio taloha ao an-dakozia
Na dia anisan'ny faritra an-trano andaniantsika fotoana firy aza ny lakozia, dia tsy maintsy eo anilany koa izy ireo ny hevitra haingo tsara indrindra. Satria amin'ny lafiny iray, mila toerana mazava isika hiasa na hamporisika azy, saingy mazava ho azy, tsy maintsy eo foana ireo mikasika ny haingon-trano. Raha tianao ny fitaovan'ny taovolo, dia azonao atao ny manararaotra mamela ny iray eo amin'ny latabatra na eo amin'ny talantalana ary manana ny radio eo akaikiny. Mba samy afaka atambatra sy mamorona zoro tena izy. Azonao atao ny manararaotra mametraka karazana vinyl misy vokany vato na amin'ny dian-tsoratra taloha izay hamenoana ity toerana ity tsy mbola nisy toy izany.
Handravaka ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny sento Retro
Marina fa manana maromaro isika fomba fanaingoana ho an'ny tranontsika. Noho izany, raha tianao ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fiotazam-boaloboka, dia vintana ianao. Koa satria ireo radio taloha dia handeha ho famenon-danja. Raha radio lehibe izy io, dia saika mety ho toy ny fanaka fotsiny fa tsy ho famenony. Fa raha tsy izany dia azonao apetraka eo amin'ny latabatra mpanampy hatrany, raha tianao ny hanome azy ireo ny laza rehetra. Na dia eo amin'ny fanaka lehibe aza dia handeha tsara eo akaikin'ny kojakoja hafa izay manana famaranana mitovy. Indraindray, raha miharatsy tokoa izy ireo, dia azonao atao mandrakotra ny vinyl amin'ny fametahana azy ireo hatrany, fa tsara kokoa raha avelantsika izy io rivotra tranainy io mba tsy hahafoana ny fotony.
Radio any amin'ny biraonao
Raha manana faritra fianarana na birao ao an-tranonao ianao, dia tsy tokony tsy hohadinoinao koa ny fotoana toy izao. Ny hevitra dia ny handravahana ireo talantalana isaky ny talantalana amin'ny radio taloha. Nahita ny kabary tamin'ny loko sy famaranana marobe isika, noho izany tsy mahagaga raha afaka manana iray eny an-tanana foana isika izay azo atambatra. Na dia tsy maintsy holazaina aza fa amin'ny ankapobeny, dia tena azo ampiarahina izy ireo. SATRIA Raha mahita modely lehibe dia lehibe isika, dia tsara kokoa ny tsy mameno ny faritra ary manadino ny manohy manampy antsipiriany bebe kokoa amin'io lafiny io. Izahay dia mila laza noho ireo radio taloha! Raha etsy an-danin'izany, raha manana antonony na kely izy ireo dia azonao atao ny manatevin-daharana azy ireo amin'ny boky izay manana famaranana taloha na misy sarina sary ary raha hitanao ny rakitsoratra vinyl hafahafa, tsy misy tsara kokoa. Araka ny hitantsika dia misy foana ny mpisolo toerana raha avelantsika hanao ny asany tsara ny sary an-tsaina.
Radio amin'ny lalantsara
Ny vavahady fidirana ao an-tranontsika dia hilaza zavatra betsaka kokoa noho izay azontsika eritreretina. Izany no mahatonga azy io ho santatry ny zavatra ho hitantsika ao anatiny. Araka izany, azo atao foana ny mankafy haingo majika toy ilay manome kintana radio taloha. Ka raha manana a kabinetra fidirana, miaraka amina telefaona antitra, fotoana izao ny filokana amin'ny fametrahana radio eo akaikiny sy ny voninkazo sasany amin'ny feo pastel. Raha tsy izany dia efa fantatrao fa afaka mamolavola ny antsipirian'ny haingon-tsika mandrakariva ianao anio, miaraka amin'ny famaranana ilainao noho ny sary an-tsary na vinyl. Manana radio toy izany ao an-tranonao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Tianao ve ny radio taloha? Mihaingo miaraka amin'izy ireo!